Home Wararka Gudaha Madaxweynahii hore Hir-Shabeelle Dr Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa yiri Qofka sidaa ah...
Madaxweynahii hore Hir-Shabeelle Dr Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa yiri Qofka sidaa ah waxaa la dhihi jiray waa geed nacas ah, fursadduu helay kama faa’iideysan, meeshuu joogayna waxba kama qabsan.
Dalkaan wuxuu soo maray xilli qofkii mas’uuliyad qaada ee madax noqda ee aan dhicin hantida Umadda la caayi jiray, dadkana ay raali ka ahaan jireen in xilka laga qaado. Xilligaa ninka dhaca hantida uu mas’uulka ka yahay waa loo riyaaqi jiray.
Qofka sidaa ah waxaa la dhihi jiray waa geed nacas ah, fursadduu helay kama faa’iideysan, meeshuu joogayna waxba kama qabsan.
Reeraha qaar wexey gaari jireen iney ka dacwoodaan ninka noocaas ah, wexeyna madaxdiisa ka dalbi jireen in loogu beddelo qof kale. Wexey dhihi jireen ‘ha nala dhaafiyo midkaan, naftiisa wax uguma yaalo, annagana waxba nooguma yaalo’.
Ninka hantida Umadda boobaya waxaa la dhihi jiray ‘hebel waa nin rag ah oo karti leh, wuxuu ka faa’iideystay fursaddii uu helay’, meeshii lagu arkana waa la soo dhaweyn jiray.
Waxaa la arki jiray reero meelo kala duwan u dacwoonaya oo leh, annaga reer ahaan ma lihin qof jooga xafiis dhaqaala leh.
Waxaa caadi aheyd inaad maqasho hebel wuxuu joogaa xafiis qalalan, qofka meeshaa joogana reerka qaaraan kama qaadi jirin, asaxaabtana shaxaad uma doonan jirin. Waxaase aad loo raadin jiray oo laga daba ordi jiray tol, qaraabo iyo asaxaab intaba qofka jooga xafiis qaraab leh.
Xilliga aan ka hadlayo waa siddeetameeyadii. Ilama aha maanta wax weyn iney iska bedeleen Soomaaliya. Waxaad arki ninkii daacadda u ahaa dalkiisa iyo dadkiisa ee ka dhowrsaday hantida umadda oo lugeynaya, guri ijaar ah ku jira, masaariiftana ay cariiri ku tahay, halka uu midka hantida shacabka dhacana dhisanayo guri dabaq ah, ka cunteynayo maqaayadaha ugu qaalisan magaalada, ku socdo gaari aad moodo inuu baraf dhali karo, la shaxaadayo, gurigiisana uusan ka jirin culeys dhanka masaariifta ah.
Soomaaliyeey Soomaali waa taa!!!
Previous articleWasaaradda Xanaanada xoolaha Galmudug ayaa qalabka sheybaarka xoolaha kala wareegtay
Next articleMagacyada Xubnaha loo saaray xallinta khilaafka u dhexeeya Mucaaradka iyo xukuumadda Somaliland.
Bangiga Adduunka oo 100 Milyan ugu deeqay Soomaaliya + halka ay...